Qodobo si hordhac ah looga heshiiyey shirka u furmay Rooble ... - Axadle Wararka Maanta
Qodobo si hordhac ah looga heshiiyey shirka u furmay Rooble …
Muqdisho ( Axadle) – Magaalada Muqdisho ee Axadle Soomaaliya, gaar ahaan Teendhada Afisyoone waxaa si rasmi ah uga furmay shirka arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka.
Axadle ayaa ogaatay qodobo gaarayo illaa afar qodob oo si hordhac ah heshiis looga gaaray, si uu shirka usii socdo isla markaasna ay wadahadalada uga bilowdaan meeshii ay markii hore ku istaageyn.
1) Guddiyada Doorashada : Ra’iisul wasaare Rooble ayaa balan qaaday in uu kala diro guddiyada doorashada ee lagu muran san yahay , isla markaan uu magacaabo guddi cusub oo lagu kalsoon yahay .
2) Gedo: waxaa muuqato in uu jiro tanaasul, ama maamulka Jubbaland lagu wareejiyo ama ay ku baxdo haddii deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo maamul gobaleed kasta
3) Arrinta Somaliland: in guddoomiye Cabdi xaashi iyo mas’uuliyiinta gobalada waqooyi ay go’aan ka soo gaaraan arrinta Somaliland loona madax banaaneeyo .
4) Amniga doorashada: Arrinta kale ee si horu dhac ah xal loogu gaaray waxaa ka mid ah in Amniga doorashada ay la wareegaan Booliiska labada heer ee Federaalka iyo AMISOM